မြေလတ်မီဒီယာဂျာနယ် သတင်းထောက် နတ်မောက်သားမြွေဟောက် က သက်ဆိုင်ရာများသို့ တိုင်ပြီ ~ Myaylatt Daily.
မြေလတ်မီဒီယာဂျာနယ် သတင်းထောက် နတ်မောက်သားမြွေဟောက် က သက်ဆိုင်ရာများသို့ တိုင်ပြီ
Tun Tauk added3new photos. မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
မြေလတ်မီဒီယာဂျာနယ် သတင်းထောက် နတ်မောက်သားမြွေဟောက် ကတိုင်ပြီ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြေလတ်မီဒီယာဂျာနယ် သတင်းထောက် နတ်မောက်သားမြွေဟောက်က တရားမဝင်သစ်ခွဲစက်လုပ်ကိုင်နေသည့်သတင်းရှာဖွေပေးပို့သည့်ကို ကြိုတင်ကြံစည်၍ လူအုပ်စုဖြင့်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခြင်းကိစ္စ အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါနိင်ရန် နေပြည်တော်ရှိပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ပြည်ထဲရေးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်မြန်မာနိင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)တို့ထံ၁၁၊၅၊၂၀၁၅ရက်နေ့ကတိုင်ကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
မြေလတ်မီဒီယာဂျာနယ်သတင်းထောက် နတ်မောက်သားမြွေဟောက်က ကျွန်တော်၃၀၊၄၊၂၀၁၅ရက်နေ့ကလူမှုရေးကိစ္စတခုနဲ့ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာမှ တာဝန်သိပြည်သူတသ်ဦးက တောင်ညောင်ကုန်းရဲစခန်းအပိုင် လေသာကုန်ကျေးရွာမှာ တရားမဝင်သစခွဲစက်(၅)လုံးခန့် တရားမဝင်သစ်ခွဲနေကြောင်း သတင်းပေးလာတဲ့အတွက် သွားရောက်လေ့လာစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်၊သစ်ခွဲစက်၁လုံးနဲ့သစ်ခွဲသား ဘကာပျဉ်များတွေ့ရှိပြီးလွှစင်နေရာတစ်ခုမှာ လွှစာမှုန့်တွေ မီးရှိုဖျက်ဆီးထားတာတွေရလို့ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်၊အဲဒီနောက် ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် တောင်ညောင်ကုန်းရဲစခန်းရှေ့ရောက်ပြီး ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးးရုံးမှာသတင်းပေးတင်ပြပါတယ်၊ပြီးရွာခွဲတာဝန်ခံ ဦးအောင်ဌေးစိန်အိမ်ကိုသွားရောက်သတင်းပို့တော့ သူကိုမတွေ့ဘဲ သူ့ဇနီးနဲ့တွေ့ပါတယ်၊သူဇနီးဆီကဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီးဆက်တော့ ကိုအောင်ဌေးစိန်က သူရွာမှာမရှိလို့ သူဇနီးထံမှ မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်သာ ရောက်ရှိကြောင်းရေးဘို့ပြောလို့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ညောင်ကုန်းရဲစခန်းရှေ့ပြန်လာပါတယ်၊
ညောင်ကုန်ရဲစခန်းရှေ့မှနေ၍ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးးရုံးသို့ သစ်ခွဲစက်အခြေအနေသတင်းပို့တော့ အရေးယူရန်နယ်မြေရဲစခန်းက်ုအကြောင်းကြားပါမယ်လို့၃၀၊၄၊၃၀၁၅ရက်နေ့နံနက်၁၀နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကအကြောင်းပြန်ပါတယ် နံနက်၁၁နာရီခွဲကျော်အထိ အခြေအနေမထူးလို့ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်တော့ ညောင်ကုန်းရဲစခန်းသို့ပြောပြီးဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်၊ကျွန်တော်က တာဝန်သိသူတစ်ဦးအနေနဲ့သတင်းပို့ခြင်းဖြစ်တယ်၊အရေးယူတာမယူတာဆရာတို့အပိုင်းသာဖြစ်တယ်၊ကျွန်တော်ကတော့ မီဒီယာကနေဖေါ်ထုတ်မယ်၊အခုနတ်မောက်ကိုပြန်တော့မယ်လို့သတင်းပို့ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်၊
ညောင်ကုန်းရဲစခန်းကအပြန် နတ်မောက်မြို့နယ် ရွာတော်ရဲကင်းမှာခေတ္တဝင်ရောက်နားတယ်၊ဖုန်းအားသွင်းပြီးထွက်လာပါတယ် နတ်မောက်မြို့နယ်စိုင်ကောင်းရဲစခန်းကိုဝင်သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်၊စိုင်ကောင်းရဲစခန်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာပြီး ညနေ၄နာရီ၅၇မိနစ်အချိန်ခန့်ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် လေသာကုန်းရွာလူကြီးဦးအောင်ဌေးစိန်က ဖုန်းနဲ့ကိုမြွေဟောက်အခုဘယ်နားရောက်နေပြီလဲ လို့မေးတော့ကျွန်တော်က ရွှေနတ်ကယ်တောက်အနီးရောက်နေပြီလိုပြောလိုက်ပါတယ်၊ကိုအောင်ဌေးစိန်နဲ့ဖုန်းပြောပြီးဆိုင်ကယ်စီးလာတာ ၁၀မီနစ်ခန့်အကြာ ပျော်ဘွယ်နတ်မောက်ကားလမ်း ဝင်အူကျေးရွာလမ်းခွဲရောက်တော့ မာစတာဂျစ်၁စီး၊လိုက်ထရပ်ကား၁စီး၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၎စီးနဲ့လူအင်အား၈ဦးကအသင့်စောင့်ဆိုင်းပြီးကျွန်တ်ာကို တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်ကြပါတယ်၊ဝိုင်းရိုက်လို့ကိုယ်လွတ်ထွက်ပြေးပေမယ့်ခြေလှမ်း၃၀ဆယ်လောက်အရောက် ကျွန်တော်မှောက်လဲသွားပါတယ်၊လူအများကတုတ်ဖြင့်ရိုက်၊ခဲနဲ့ပစ်၊ကြလို့ ဦးခေါင်း၊နာခေါင်း၊ရင်ဘတ်၊တံတောင်ဆစ်၊လက်ခြေထောက်တိုမှာဒဏ်ရာတွေရရှိပါတယ်၊ရိုက်နှက်သူတွေက ငါ့တို့ရွာကိုလာရှုပ်တဲ့ကောင် သေစမ်းကွာ မသေလိုဒို့ရွာကိုလာရဲလာကြည့် အသေသတ်ပစ်မယ်လို့ပြောပြီးရိုက်ကြတယ်၊ကျွန်တော်သေချင်ယောင်ဆောင်လို့သာ သူတို့ကခြေနဲ့ကန်ကြောက်၍မလှုပ်မှသာဆက်မရိုက်ကြတာ၊စပြီးရိုက်တဲ့အချိန်အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လိုက်ထရပ်ကားအဖြူရောင်ပေါ်က အမျိုးသမီမှဟေ့
ကျွန်တော်က မီဒီယာသမားတစ်ဦးအနေနဲ့ ပြည်သူအကျိုးပြု ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်၊အခုဖြစ်စဉ်မှာလည်း တာဝန်သိစိတ်နဲ့ပျော်ဘွယ်မြှိုနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးနဲ့တောင်ညောင်ကုန်ရဲစခန်းကို တင်ပြအကူအညီတောက်းခံသော်လည်း အချိန်နဲ့တပြေညီကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိင်ခြင်းမရှိပါဘူး၊ကူညီပါရစေဟူသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဆောင်ပုဒ်ရှိသောလည်းကူညီခြင်းမရှိဘဲအခုလိုမီဒီယာသမားတဦး အရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်သာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်၊ပြည်သူဗဟိုပြုရဲလုပ်ငန်းစနစ်အရ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်ရတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အခုဖြစ်ရပ်မှာ ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိင်ခြင်းမရှိလိုသာ ယခုကဲ့သို့လူအုပ်စုဖွဲ့(ကြိုတင်ကြံစည်မှု)နဲ့သတင်းထောက်တစ်ဦးကို ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကြတယ်လို့ယူဆပါတယ်၊မြန်မာနိင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ နယ်စပ်ဒေသမဟုတ်ဘဲ ပြည်မအတွင်းပိုင်း လူနေထူထပ်တဲ့ဒေသများမှာတောင် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် သတင်းထောက်ကို ရိုက်နှက်ခံရခြင်းက မြန်မာနိင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို စိန်ခေါ်နေပြီလားလို့ယူဆရမလိုဖြစ်နေပါတယ်၊ဒါကြောင့် သစ်ခွဲစက်ကိစ္စသတင်းပေးတဲ့ငတင်းထောက်ကို လူတစုက မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နက်ခံရတဲ့ကိစ္စကို အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးနဲ့တောက်ညောင်ကုန်းရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကို ထိရောက်စွာအရေးယူရေးအတွက်အခုလိုတိုင်ကြားရတာပါဟုပြောသည်။
အောင်ကောင်းစည်၊် သတင်းထောက် နတ်မောက်သား